iPhoto na-eme ka o kwe gị omume jikwaa gị foto n'etiti ọtụtụ faịlụ nchekwa. Ị nwere ike mfe sọfụ photos na gị onwe gị ọbá akwụkwọ guzozie si iPhoto, na-enweghị mkpughe ọ bụla otu nchekwa nanị na-ele foto, ma ọ ichu nta nile kọmputa gị iji na-esochi nke a họrọ foto.
Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, i nwere ike ịhụ na ọ bụ ezi na-ewe oge jikwaa gị iPhoto ọba akwụkwọ. Ọ bụ ya mere Abụba Cat Software ịzụlite a ịba uru akpọ iPhoto Library Manager. Ọ Ọzọkwa na-enye gị ikike iji emepụtaghachi foto gị site na otu akpan akpan n'ọbá akwụkwọ dị iche iche n'ọbá akwụkwọ, na-eme n'aka na ị na mgbe niile na-niile dị mkpa ọmụma. Omume na collections na-nwetaghachiri mgbe ọ bụla duplicated, ma ma nke gbanwetụrụ na pụrụ iche albums nke ọ bụla image na-depụtaghachiri otú kwesịrị ekwesị. Ị nwere ike mfe eke a arọ n'ọbá akwụkwọ n'ime ọtụtụ kọmpat ọba akwụkwọ, ngwakọta n'ozuzu ọba akwụkwọ na-esote onye ọ bụla ọzọ kpọmkwem n'ime a nnukwu otu, ma ọ bụ mezie a emerụ n'ọbá akwụkwọ nke a na-wetere iPhoto ka dangle ma ọ bụ nkukota. Ị nwere ike ime ka ojiji nke iPhoto Library Manager si photos nchọgharị iji ngwa ngwa na-ele gị photos ndebe imeghe iPhoto onwe ya. I nwekwara ike inyocha maka foto na a naanị Ọbá akwụkwọ, ma ọ bụ transversely niile nke gị ọbá akwụkwọ n'otu oge. Ebe a bụ ndu na-esi eji nke a iPhoto Library Manager.
1. Mepụta ọbá akwụkwọ ọhụrụ
2. Bugharịa ọba akwụkwọ
3. Chọta oyiri photos
4. Jikota iPhoto ọba akwụkwọ
5. Wughachi rụrụ arụ ọba akwụkwọ
Ka ịmepụta ọbá akwụkwọ ọhụrụ, ị nwere ike na-aga "File"> "Mepụta Library" ma ọ bụ pịa "Mepụta Library" bọtịnụ na iPhoto Library Manager window. Mgbe ahụ a window ga-gbapụta ka ị na-ahọrọ aha na ọnọdụ maka ọbá akwụkwọ ọhụrụ. Site ndabara, ọhụrụ kere n'ọbá akwụkwọ ga-efu na ihe na ị nwere ike họrọ ihe oyiyi na-kwukwara na ya.
2. Paghaa ọba akwụkwọ
Na-egosi otu ma ọ bụ ukwuu ọba akwụkwọ onye ihe ị ga-eleghị amasị ịkwaga n'ime dị iche iche katalọgụ, ịdọrọ ọba akwụkwọ site na ọbá akwụkwọ ndekọ na ekpe na-ada ha niile n'elu ebe kpọrọ "Họrọ Isi Iyi Libraries".
Mgbe na ị chọrọ tụọ kpọmkwem ihe iPhoto n'ọbá akwụkwọ na ị chọrọ iji nweta niile foto na ndị ọzọ na ọdịnaya na ị na-agakọ. Ị nwere ike ma sere otu n'ime gị tupu ẹdude ọba akwụkwọ kwupụta ebe ọ na-ekwu "dobe ebe ọbá akwụkwọ", ma ọ bụ bụrụ na ị chọrọ ka amasị gị tupu ẹdude ọba akwụkwọ na-ngwakọta n'ime a ika ọbá akwụkwọ ọhụrụ, pịa "jikota n'ime ọhụrụ, ohere iputa ọbá akwụkwọ "isi. Ị ga-ahụ ga rịọrọ ịhọrọ a aha na-edebe na draịvụ ike gị ngwaahịa elu ika-ọbá akwụkwọ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbanwe ebe a na-eme n'ọdịnihu, dị nnọọ pịa "Change ọnọdụ" button ime otú ahụ.
iPhoto Library Manager na-enyekwa ikike chọta na-ewepụ oyiri photos. Ị nwere ike ma pịa "Chọta Duplicates" button ke toolbar ma ọ bụ họrọ "Chọta Duplicates" si n'ọbá akwụkwọ menu. Mgbe ahụ, na-ahọrọ ọbá akwụkwọ ị chọrọ ịchọ nọ n'ógbè "Họrọ Libraries ịchọ". See "X" wepụ a n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ "exclusions ..." button egwú na-achọ na photos na-ma na iPhoto ahịhịa, na-akara dị ka zoro ezo, ma ọ bụ na-ama nwere isiokwu aha ya bụ "oyiri" kenyere ha na iPhoto.
Mgbe ahọrọ tụnyere nhọrọ iji chọpụta ma ihe oyiyi na-duplicates. Ebe a na-abụọ nhọrọ:
Kpọmkwem egwuregwu: tụnyere ihe oyiyi faịlụ ozugbo na-egosipụta ọ bụla nke na-byte na-byte duplicates nke ọ bụla ọzọ.
Dakọtara na filename + Ụbọchị: ọ ọkụ photos dabere na ha faịlụ aha na ụbọchị.
Mgbe mwube gị search, pịa-acha anụnụ anụnụ "Chọta Duplicates" button (ọ bụ na elu nri akuku nke window), na iPhoto Library Manager ga-amalite nyochasịrị gị ọbá akwụkwọ maka oyiri photos.
Mgbe ha niile oyiri photos na-achọta, a ngwa-eji a na-achị dabeere na usoro ịhọrọ a n'ezi ihe. Mgbe ahụ ike nke ga-akpali gị na ahịhịa, ma ọ bụ nwere ụfọdụ ndị ọzọ edinam rụrụ na ha. Ị nwere ike ịhọrọ site na ọtụtụ wuru na-oyiri iwu iji mmapụta menu ala na ala nke window. I nwekwara ike họrọ "Dezie Iwu" melite gị onwe gị na-achị na-ahọrọ n'ezi ihe.
Mgbe ndị nche na-kpebiri, ị nwere ike ahụ na-eme ihe omume ndị photos na oyiri ìgwè. Dịnụ edinam ụdị na-"Kwafee ahịhịa", "Flag", "Zoo", "Tinye ka Album" ma ọ bụ "Kenye Keyword". Ị nwere ike ịhọrọ ihe emereme dị ka gị mkpa.
iPhoto Library Manager-enyere gị aka ikpokọta ihe nke ọtụtụ ọba akwụkwọ kpam kpam n'ime otu, mgbe ịnọgide na-enwe gị niile albums, ihe, na foto metadata. Iji mee nke a, dị nnọọ aga Njikwa> jikota Libraries ma họrọ niile ọba akwụkwọ ị chọrọ ka jikota site n'aka ekpe kọlụm. Mgbe ahụ, pịa na onye ị ga-amasị idetuo photos na ya site na nri n'igbe. Họrọ "Unu mbubata duplicates" igbe na pịa "Gaa n'ihu."
Ọtụtụ mgbe ugboro ihe iPhoto n'ọbá akwụkwọ nwere ike ina mebiri emebi tinyere efu si na photos, amaghị iPhoto hangs, ma ọ bụ n'otu ntabi collisions. Na iPhoto Library Manager, ị nwere ike ikwu ụzọ a ọbá akwụkwọ ọhụrụ dabere na gị ugbu a Ọbá akwụkwọ, wetere na a nweta ume data isi iyi free nke ire ure. Ị pụrụ ọbụna achọgharị photos n'ọbá akwụkwọ na iPhoto nwere ike furu efu track nke.
Ọ bụrụ na ị chọrọ wughachi iPhoto Ọbá akwụkwọ, na-aga "Library"> "wughachi Library" ma họrọ a ọnọdụ maka wughachi Ọbá akwụkwọ na ma ma ọ bụ na ị chọrọ iPLM ka achọgharị mgbei photos ọ chọtara ahụ n'ọbá akwụkwọ ngwugwu. Mgbe ahụ ngwa ga-atụle n'ọbá akwụkwọ ma wughachi ya na ndị kasị mma o nwere ike na-enye gị a atụ nke ihe ọ bụ ike ịchọta. Wee pịa "wughachi" button ike ọhụrụ Ọbá akwụkwọ na re-ibubata ọdịnaya nke mbụ n'ọbá akwụkwọ ndị ọhụrụ otu.
Mac OS X Yosemite Nchọpụta nsogbu
Otú nyefee faịlụ site iPod ka Mac
Otú nyefee Photos ma ọ bụ foto ndị si Mac ka iPad ma ọ bụ iPad Obere
3 Ụzọ Ime Data Nnapụta Mac Mfe
> Resource> Mac> Olee otú Jiri iPhoto Library Manager